गोप्य दृश्य बाहिरिएपछि हिरोईनलाई तनाब ! (फोटो फिचर)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
गोप्य दृश्य बाहिरिएपछि हिरोईनलाई तनाब ! (फोटो फिचर)
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘जुली २’ मा समावेश केहि गोप्य दृश्य बाहिर आएपछि निर्माण टिम तनाबमा परेको छ । हटको उपमा पाएकी अभिनेत्री राय लक्ष्मीले त टुइटरमा रिस पोख्दै आपत्ति समेत जनाएकी छिन् । उनी अहिले तनाबमा परेकी छिन् ।
एक समय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीसँगको अफेयरको कारण चर्चामा आएकी राय लक्ष्मीले क्षेत्रिय फिल्म गरिसकेपछि यो फिल्मबाट नै वलिउडमा डेब्यू गरेकी हुन् । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउनु पुर्व नै यो फिल्ममा समावेश केहि ‘इन्टिमेट’ दृश्यहरु बाहिर आएका थिए ।
जहाँ हट अबतारमा ‘लिप लक’ दृश्यमा राय लक्ष्मी देखिएकी छिन् । अनलाइनमा सार्वजनिक दृश्यपछि पाइरेसी विरुद्ध निर्माण टिमले आवाज उठाएको छ । तीन मिनेट लामो उक्त दृश्य बाहिरिएको भारतिय मिडियामा समाचार छ । दिपक शिवदासानी निर्देशित चलचित्र ‘जुली–२’ सन् २००४ मा बनेको ‘जुली’को सिक्वेल हो ।